Otu esi etinye MATE Desktop 1.26 na Ubuntu 21.10 Imish Indri - LinuxCapable
October 27, 2021 October 16, 2021 by Jọshụa James
Ịdọ aka ná ntị gbasara mwepụ nke MATE
Otu esi emelite Desktop MATE
Maka ndị na-amaghị Gburugburu Desktọpụ MATE, ọ bụ ihe na-aga n'ihu nke GNOME 2. A ma ama maka ịdị arọ, ngwa ngwa, na kwụsie ike na-arụ ọrụ na Linux na ọtụtụ BSD sistemụ arụmọrụ. MATE bụkwa nhọrọ magburu onwe ya maka sistemụ dị ala ma ọ bụ ndị na-achọ ịnọgide na-arụ ọrụ nke ọma na akụrụngwa sistemụ. Ọzọkwa, mbipụta Ubuntu MATE raara onwe ya nye dị maka gburugburu desktọpụ a, na-adọta ndị ọrụ ka ha gbanwee na Ubuntu kpamkpam.
Na Ubuntu 21.10 Impish Indri, MATE desktọọpụ 1.26 bụ ụdị ndabara na-eweta ndọtị nkwado Wayland, nke ruru ngwa na gburugburu ebe obibi dị ka ATRIL, Sistemụ Monitor, Pluma Text Editor, na Terminal Emulator n'etiti mgbanwe kachasị elu. Maka ndepụta mgbanwe zuru oke, gaa na mgbanwe wiki.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye MATE Desktop 1.26 na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.10 gị.
OS akwadoro: Ubuntu 21.10
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na Na-agbakwụnye na Tinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Tupu ịwụnye MATE, mepụta nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ya ma chọọ ịlaghachi na Ubuntu. Iwepu gburugburu DE ọ bụla adịghị mma na ọ ga-eduga na nkwụsi ike nke sistemu yana arụnyere ngwa enweghị usoro. N'ozuzu, ọ bụ usoro na-egbu mgbu ịlaghachi na steeti mbụ tupu etinyere MATE, karịsịa maka onye ọrụ ọhụrụ na nkezi.
N'ozuzu, enwere ike iwepụ ya, mana ọ ka mma ịwụnye Ubuntu ọhụrụ ma hichaa usoro ahụ dị ọcha n'ihi na ọ ga-ewe obere oge, ya mere inwe atụmatụ ndabere, karịsịa mgbe ị na-anwale ebe ọ bụla desktọọpụ ọzọ dị otú ahụ. dị ka MATE, dị ezigbo mkpa ọ gwụla ma ị chọghị ihichapụ sistemụ gị, malite na.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ka ịga n'ihu na ntinye nke MATE Desktop.
Nrụnye ahụ nwere ọtụtụ ngwugwu iji budata na wụnye, nke mere na oge ga-adịgasị iche na ngwaike sistemụ na karịsịa njikọ ịntanetị. N'ozuzu, nha nke ebudatara bụ obere ihe 700MB, na oke achọrọ ma emesịa na ohere diski dị gburugburu 2.6GB.
Dị ka mmepụta n'elu kwuru, ozi a na-agwa gị maka onye njikwa ngosi ịhọrọ. Maka gburugburu desktọpụ MATE, nke a ga-abụ "lightdm". Pịa "TAB" igodo ịhọrọ ma pịa gị "Tinye igodo" aga n'ihu.
Abanyela ozugbo. Nke mbụ, ịkwesịrị ịlele gburugburu desktọpụ. Emere nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi dị n'akụkụ aka nri elu nke mpio nbanye, n'aka nri nke aha njirimara gị, wee họrọ ya. "NWỤNWA" kama "Ubuntu (nke ndabara)".
Ọbụna Firefox bụ ihe nchọgharị ndabere nke nhọrọ, ahụla ụfọdụ nkwalite mara mma.
Iji kwado nrụnye ahụ, ngwungwu bara uru ịwụnye bụ Neofetch. Na ndabara, ekwesịrị iji MATE tinye nke a.
Dị ka mmepụta n'elu gosiri, ị tinyela MATE 1.24.0 nke ọma na Ubuntu 21.10 Imish Indri.
Gbaa ụkpụrụ dabara adaba maka mmelite n'ọdịnihu maka gburugburu desktọpụ MATE yana ngwugwu ndabara Ubuntu 21.10.
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi etinye MATE Desktop Environment na Ubuntu. N'ozuzu, MATE bụ nnukwu ọrụ obodo maka ndị na-achọ nkwụsi ike na ọ dị mma maka ndị chọrọ ihe kachasị na desktọpụ ha, laptọọpụ, na netbook ma na-ahọrọ ihe atụ desktọọpụ omenala.